Joan Margarit nwetara Cervantes Nrite. Poems 4 | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Foto: weebụsaịtị Joan Margarit.
Joan Margaret naanị merie Ihe nrite nke Cervantes 2019. Onyinye edemede kacha mkpa n'asụsụ Spanish, nke enyere 125.000 euro, abanyela na nke a Catalan onye na-ede uri nke zụlitere ọrụ ya n'asụsụ abụọ ahụ, dị ka ọkọlọtọ nke njiko ọdịbendị karịrị echiche ọ bụla. Ndị a bụ 4 nke uri ya iji mara ya, Gụọ ya ma ọ bụ chọgharịa ya.
2.1 Anọ n'ụtụtụ
2.2 Leta ahụ
2.4 Isi ọkụ n'abalị
Joan Margarit i Consarnau mụrụ na Sanahuja, Lleida, na May 11, 1938. Ọ bụ ede abu, akitekiti na prọfesọ ugbua lara ezumike nká na Mahadum Polytechnic nke Barcelona. Dị ka onye na-ede uri malitere ibipụta akwụkwọ n’asụsụ Spanish laghachi na 60 na Egwú maka ukwe nke otu nwoke naanị. Ma o meghị ya ọzọ ruo afọ iri mgbe nke ahụ gasịrị Akwụkwọ akụkọ. Afọ ole na ole ka e mesịrị, ọ malitere ibipụta na Catalan. Ọ bụ ya onwe ya onye sụgharịrị ọrụ ya na Spanish, ọ bụ ezie na ọ na-edekwa n'ụzọ doro anya na otu ma ọ bụ nke ọzọ. N'afọ gara aga, ọ bipụtara ihe ncheta ya: Iji nweta ụlọ ị ga-emeri n'agha ahụ.
En 2008 Joan Margarit bụ Onyinye Pobụ Mba nakwa Nrite Mba maka Akwụkwọ na Generalitat nke Catalonia. Na n'ime 2013 nwetakwa onyinye Ndị na-ede uri Latin World Víctor Sandoval, esi Mexico. Onyinye Cervantes a choro okpueze oru ya, nke bu kwa nke otu n’ime ndị gụrụ akwụkwọ n’oge a na-agụkarị n’asụsụ Spanish.
Anthology na-agụ bụ na nke Ugo niile (1975-2015). M họọrọ anọ ndị a.
Nkịta mbụ na-ebe ákwá, ozugbo
enwere nkuzi mgbamejije n'ogige, ndị ọzọ na-ada
n'otu oge na otu ogbugbo,
aka ike ma na-enweghị ụda.
Ha na-agbọ ụja, imi ha na-aga n’eluigwe.
Dogs si ebe, nkita? Kedu echi
kpoo mkpọtụ nke abalị?
Anụ m ka ị na-ebe ákwá na nrọ nwa m nwanyị
site na pallet, gbara ya gburugburu site na nsị
nke i ji akanye akara na ya
nke alleys, patios, oghere.
Dị ka m na-eme
na poems m, ebe m na-eti mkpu
m na-akanye ókè nke ọnwụ.
Na-elepụ anya n'ihu mgbe niile
dị ka a ga-asị na oké osimiri dị. I kere
n'ụzọ dị otú a ije nke ebili mmiri
ọbịa na akụkọ ifo na ụfọdụ osimiri.
Ejikọtara anyị na ike dị egwu
nke na-enye ịhụnanya owu ọmụma.
Ọ ka na-eme ka mkpịsị aka m maa jijiji,
n’amaghị ama akwụkwọ a.
Pathzọ agbahapụ n'etiti mụ na gị,
kpuchie site na akwụkwọ ozi, akwụkwọ nwụrụ anwụ.
Ma ama m na ụzọ ahụ dịgidere.
Ọ bụrụ na m tụkwasị aka m na obere ùkwù ahụ,
Ọ dị m ka ọ dabere n’azụ gị.
Used na-ege ntị
dị ka a ga - asị na oké osimiri dị, agbanweelarị
n'olu ike gwụrụ, nke siri ike, na-ekpo ọkụ.
Obere ihe jikọrọ anyị n'otu: naanị ọma jijiji
nke a mma akwụkwọ n'etiti mkpịsị aka.
Ọtụtụ ihe na-efu gị.
Thebọchị zuru ezu
oge nke ichere aka gị,
ileghara obere aka gị anya,
na ha nara nke m ọtụtụ oge.
Anyị ga-ejirịrị ọbịbịa gị.
Oge ọkọchị agafeela n'enweghị anya gị
oké osimiri ga-ejikwa ya mee ihe.
N'okporo ámá gị, ruo ogologo oge,
ga-echere, n'ihu ọnụ ụzọ gị,
site na ndidi, usoro gị.
Of gaghị ada mbà ichere:
onweghi onye ma ka esi eche dika okporo uzo.
Nke a ga-ejuputakwa m
na ị na-emetụ m aka nakwa na ị na-ele m,
ị gwa m ihe m ga-eji ndụ m mee,
Ka ụbọchị na-aga, na mmiri ozuzo ma ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ na mbara igwe,
na-ahazi owu ọmụma.
Isi ọkụ n'abalị
Ana m agbalị ịrata gị n'oge gara aga.
Aka na wiilị na ọkụ a
site na klọb nke abalị nke dashboard ha hapụrụ m
- mmeri fantasy-agba egwu gị.
N'azụ m ka ọ dị ka nnukwu ụgbọala
echi na-eme ka ọkụ nke ọkụ.
Ọ dịghị onye na-anya ya ma chụkwute m,
ma ugbu a, mụ na gị na-agakọ njem ọnụ
na ụgbọ ala nwere ike ịbụ ịnyịnya abụọ
site na sixties na Paris.
"Je ne regrette rien" bụrụ abụ Edith Piaf.
N'okpuru windo, abalị na-abata
oyi site n'okporo ụzọ, na oge gara aga
ọ na-abịaru nso n'isi, ọsọ ọsọ:
gafere ma kpuo ìsì m n’etughi ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Noticias » Joan Margarit nwetara Cervenes Nrite. 4 poems
Grupo Planeta mechiri Circle of Readers